Somaliland oo qaylo dhaan ka muujisay mowjadda 3aad ee COVID-19 | Dhacdo
Home Wararka Maanta Somaliland oo qaylo dhaan ka muujisay mowjadda 3aad ee COVID-19
Somaliland ayaa qaylo dhaan ka muujisay mowjadda 3aad ee xanuunka COVID-19, ka dib markii maalmihii ugu dambeysay ay deegaanadeeda ka diiwaangelisay kiisas badan oo dhimasho leh.
Cabdiwahaab Cabdi Jaamac, Madaxa Waaxda Kahortagga Cudurada Faafa ee Wasaaradda Caafimaadka Somaliland ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay diiwaangeliyeen xaalado badan oo Coronavirus la xiriira.
“Markaan ka soo bilaabo 11-kii bishan 500 oo qof baa la baaray, waxaana laga helay xanuunka 52 qof, shan baa dhimasho ahaa. 12-kii bishan September waxaa la baaray 452 qof, 73 baa laga helay, saddex baa dhimasho ahaa. 14-kii bishan waxaa xanuunka laga baaray 485 qof, waxaana laga helay 84 qof, afar baa dhimasho ahaa. Marka waxaad ka arkaysaa halkaa sida uu kor ugu kacayo ee dhimashaduna ay u jirto, sidaasuu u socdaa maalmahaan u dambeysay.” Ayuu yiri Cabdiwahaab Cabdi Jaamac.
Cabdiwahaab Cabdi oo la hadlay BBC ayaa yiri “Waxa keenay waxaa weeyaan maalmihii hore ama billihii hore ayaa wuxuu xanuunka gaaray 0 (Eber), taasu waxay keentay in lees dhigto, is dhigashada la’is dhigtay ayaa waxay keentay inuu si degdeg ah u soo galo mowjaddii 3aad ee adduunkoo dhanba aynu ka maqleynay.”
Cabdiwahaab Cabdi ayaa tilmaamay in is dhigashadaasi ay ku timid xukuumadda oo ka gaabisay wecyigelintii dadweynaha ee xanuunka iyo dadweynaha oo qudhooda aan samaynin wax taxadar ah.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in mowjadan 3aad ay ka duwan tahay mowjadihii hore, ka dib markii uu sheegay in si guud looga dareemay deegaanada Somaliland.
“Kani wuxuu kaga duwan yahay doorkii hore dhinac bay u badnaan jirtay, laakiin maantay waxaa weeyaan min Laascaanood, Sanaag, Boorama, Hargeysa iyo Berbera, Hargeysa ha ugu badnaato, laakiin wuu wada saameeyay gobolada oo dhan.” Ayuu yiri Cabdiwahaab Cabdi.
Waxa uu intaasi ku daray “Waxaa la wadaa hadda laba tallaabo in la qaado, iyadoo la dardargelinayo wecyigelintii, faraxashadii, kala foggaanshihii iyo tallaabooyinkii caadiga ahaa caafimaadka ee Wasaaradda iyo Guddiga ay qaadayaan. Waxaa kaloo jira in tallaalka iyana la ballaarinayo oo lixdan kun oo doos ay Khamiistan imanayaan.”
Previous articleDr. Dufle oo doorashada Aqalka Sare ku garaacay Danjire Tarsan
Next articleWararkii ugu dambeeyay dagaalka Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir